DAAWO: Xildhibaano Xukuumadda ku eedeeyay Baaqashadii Kulankii Baarlamaanka iyo waxa dhacay - Hablaha Media Network
DAAWO: Xildhibaano Xukuumadda ku eedeeyay Baaqashadii Kulankii Baarlamaanka iyo waxa dhacay
HMN:-Xildhibaano ka tirsan Baarlamaanka Somaliya, ayaa ku eedeeyay Xukuumadda inay ka dambeysay baaqashada kulankii Baarlamaanka Somaliya ay ku yeelan lahaayeen xarunta Golaha Shacabka, kaasi oo u baaqday Kooram la’aan.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salad Iyo Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi, ayaa si wadajir ah waxa ay uga hadleen arintaan waxaana ay ku eedeeyeen in Xukuumadda ay ka dambeysay qorshahan.
Sakariye Maxamuud Xaaji Cabdi, ayaa wuxuu sheegay in wax lala yaabo ay tahay in Xubno ka tirsan Wasiirada Somaliya oo haddana Xildhibaano ah iyaga oo jooga xarunta Golaha Shacabka ay saxiixi waayeen buuga isxaadirinta Xildhibaanada.
Wuxuu sheegay waxa dhacay inay yihiin arin fool xun shacabka Somaliyedna ay u sheegayaan inay jiraan Xildhibaano aanan rabin shaqada qaranka inay si wanaagsan ku socoto.
Xildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa dhankiisa sheegay saaka aroortii in la xiray wadooyinka Magaalada Muqdisho, iyadoo looga gol leeyahay in lagu baajiyo kulanka Baarlamaanka ee maanta.
Wuxuu sheegay arintaan inay u muuqato mid ay soo abaabuleen Xukuumadda, maadaama wadooyinkii laga xirtay Xildhibaanada oo ay ku adkaatay inay soo gaaraan xarunta Golaha Shacabka.
Gudoomiyaha Baarlamaanka Somaliya Jawaari ayaa waxa ka dhacay Golaha Shacabka ku tilmaamay mid aad u fool xun, maadaama Xildhibaano iyaga oo jooga diiday inay saxiixaan buuga Isxaadirinta Xildhibaanada Baarlamaanka.